विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा जारी कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने ५ उपाय « Bikas Times
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा जारी कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने ५ उपाय
प्रकाशित मिति : 25 March, 2020
सिंगै विश्वलाई घरमा बन्धक बनाएर कोरोना भाइरसले राज गरिरहेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरसको सन्त्रास बढेको छ । अहिले सम्म विश्वमा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या ४ लाखभन्दा बढी भइसकेको छ । करिब १९ हजार भन्दा बढि मानिसले भाइरसको कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मुख्य पाँच उपाय सुझाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार यो महामारी रोक्ने दिशामा सबैभन्दा प्रमुख कुरा यसको परीक्षण हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो भाइरसको परीक्षणलाई संक्रमण रोक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय भएको बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार समयमा नै यो भाइरसको संक्रमणको परिक्षणमा जोड दिएका देशहरु तथा स्थानहरुमा नयाँ संक्रमणको कमी देखिएको छ । दक्षिण कोरियाले प्रतिदिन अमेरिकाले एक महिनामा गर्नेभन्दा धेरै कोरोना संक्रमणको परीक्षण गरेका कारण नयाँ संक्रमण रोकिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबि छ । डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक एडोनोम गेब्रेयुसले सबै मुलुकलाई परीक्षण, परीक्षण र परीक्षण गर्नको लागि सुझाव दिएका थिए । धेरै मुलुकमा गम्भीर लक्षण देखिएपछि मात्र परीक्षण गरिन्छ । त्यसैले ती मुलुकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुनुको सट्टा बढिरहेको छ ।
२. संक्रमितलाई एकान्तमा राख्नु वा क्वारेन्टाइनमा बस्नु
विश्व स्वास्थ्य संगठनले बिरामीको पहिचान, परीक्षण र उनीहरुलाई एकान्तमा राख्ने यो भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने अर्को उपाय भनेको छ । दक्षिण कोरिया र चीनले क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम निकै राम्रो काम गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । परिक्षणबाट संक्रमितलाई एकान्तवास अर्थात क्वारेन्टाइनमा पठाउनका लागि सहयोग पुग्ने गर्दछ । चीन, ताइवान, सिंगापुर र हङकङले पनि यही प्रक्रियालाई अपनाएका छन् । जसले भाइरसको प्रकोप पनि यी मुलुकमा कम देखिएको छ ।
३. तयारी र तत्काल कारवाही
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै पनि भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि तयारी र कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । भाइसर फैलिनुभन्दा पहिला नै त्यसलाई रोक्न कदम चाल्नु सवै भन्दा उत्तम हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव छ । ताइवान र सिंगापुरजस्ता मुलुकले कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि तयारी निक्कै राम्रो गरेका कारण नयाँ संक्रमणको पहिचान गरे र उनीहरुलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने निर्णय गरे । यो भाइरस नियन्त्रणको लागि निर्णायक कदम साबित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । विशेष गरी यी मुलुकको तयारी राम्रो भएको कारण भाइरस नियन्त्रणमा आएको हो । ताइवानमा यस्ता महामारीबाट पार पाउन सन् २००३ मा नै कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिएको थियो । यो सेन्टरको स्थापना सार्स भाइरसको समयमा गरिएको थियो र यसले धेरैपटक भाइरस कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा अभ्यास पनि गरेको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मुलुकमा यो भाइरसको संक्रमण प्रवेश गरिसकेको छ भने त्यसलाई रोक्ने कुनै पनि उपाय छैन । यस्तोमा यो समस्याबाट बच्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका सामाजिक दूरी कायम राख्नु नै हो । हङकङमा जनवरी महिनामा नै घरबाट काम गर्ने, सबै विद्यालय बन्द गर्ने र सबै किसिमको आयोजनामा रोक लगाइएको थियो । सिंगापुरले विद्यालय बन्द गरेको त थिएन, तर विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको नियमित परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
५. सफाइप्रति सचेत बनाउनु
डब्ल्यूएचओले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने दिशामा नियमित रुपमा हात धुन र स्वच्छतामा रहन निकै आवश्यक रहेको बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले धेरै मुलुकले सन् २००३ को सार्स संक्रमणटबाट सिकेर कोरोना नियन्त्रणमा सजगता अपनाएका हुन् । सिंगापुर, हङकङ र ताइवानमा ‘एन्टि ब्याक्टेरियल जेल’ छन् । जहाँबाट मानिसले आफैंलाई स्यानिटाइज गर्न सक्छन् । यसका साथै यी मुलुकमा मास्क लगाउने चलन पनि छ । यो संक्रमण रोक्ने एकमात्र तरिका होइन तर खोक्दा र हाच्छ्यूँ गर्दा हावामा फैलिनसक्ने भाइरसलाई भने रोक्न सकिन्छ ।
विश्वभर मलेरेरियाका लागि प्रयोग हुने औषधीको माग बढ्दो
कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिइरहेका वेला यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी रूपमा मलेरियाका लागि प्रयोग हुने
नर्भिक अस्पतालले दियो एक हजार थान पीपीई
नर्भिक अस्पतालले नेपाल सरकारलाई एक हजार थान पर्सनल प्रोटेक्टेड इक्विपमेन्ट (पीपीई) हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना
कोरोना भाइरसको संक्रमणको परिक्षणको दायरा बढाउदै सरकार
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण गर्ने नीतिमा परिवर्तन गर्दै शंकास्पद सवैको परिक्षण गर्ने तयारी थालेको
श्रीमान/श्रीमती सधै खुशी रहन ख्याल राख्नुस् यी १० कुरा…
काठमाडौँ । सुखद् दाम्पत्य जीवनको चाहाना त सबैको हुन्छ । तर सबैका चाहनाहरु पूरा हुँदैनन्